onlineakhabar.com: हेर्नुहोस् भिडियो !! इन्डियन आर्मी र चाइनाका आर्मीहरु कसरी झगडा गरिरहेका छन् (Watch Video)
Amazing News, Amazing Video, Border, China Army, India News, Indian Army, Video, Viral Video » हेर्नुहोस् भिडियो !! इन्डियन आर्मी र चाइनाका आर्मीहरु कसरी झगडा गरिरहेका छन् (Watch Video)
हेर्नुहोस् भिडियो !! इन्डियन आर्मी र चाइनाका आर्मीहरु कसरी झगडा गरिरहेका छन् (Watch Video)
भारत प्रायजसो छिमेकी देशहरुसँग बिभिन्न कारणहरुले बिवादमा आइरहने गर्दछ । छिमेकी सँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाउनु पर्नेमा उल्टो भारतसँग सिमा जोडिएको देशहरु नेपाल, पाकिस्तान, चाइनासँग भारतको सम्बन्ध त्यति राम्रो छैन ।
नेपाल सँग पनि बिभिन्न बिषयलाई लिएर समय समयमा खटपट भैरहने गर्दछ । केही समय अगाडी मात्र नेपालको संविधान घोषणालाई लिएर भारतले निकै लामो समयको अघोषित नाकाबन्दी गर्यो ।
यहाँ यस भिडियोमा चाइनाका आर्मीहरु र भारतका आर्मीहरु बिच बिवाद भैरहेको छ । यि दुई बिच बिवाद हुनु कुनै ठूलो कुरा होइन । किनभने यो भन्दा अगाडी पनि यस्ता भिडियोहरु सामाजिक संजालहरुमा देखा परिरहेका थिए । हेर्नुहोस् भिडियो आखिर किन के कारणले बिवाद गरिरहेका छन् ।
Tags : Amazing News Amazing Video Border China Army India News Indian Army Video Viral Video